About Us - Shenzhen Youlumi Co., Ltd
Dana Us: +86 185 7557 3399
Akatungamirira Corn Lamp
Akatungamirira Garage chiedza Series
Akatungamirira IP64 zviyo chiedza Series
Akatungamirira Dock Light
Akatungamirira Work Light
Akatungamirira Retrofit Kits
Akatungamirira High Mast Lamp
Akatungamirira Linear Panel Light
Akatungamirira Linear Magnetic Retrofit Kit
Shenzhen Youlumi Co.LTD unyanzvi mu mukugadzira akatungamirira okuvimba zvigadzirwa. Tichizvikudza nenyanzvi uye zvakaitika R & D chikwata, vakatsunga kukunda matambudziko pakukura, kugadzirwa nokuparadzirwa maitikiro ose okuvimba mukugadzira. Youlumi chakaita nhengo dzechikwata zvinokurudzira mberi chekambani mu akatungamirira zvemichina. Achiisira chipimo vakwikwidzi yaro indasitiri.
Yakatangwa July 2012, isu takaita vava girobhu racho zviyo chiedza akatungamirira zvigadzirwa. Muna 2013, tinobudirira premiered yedu itsva 150W uye 200W zviyo zviedza iyo yaiva midzi mutyairi. chigadzirwa yedu siyana anoramba anowedzera uye ikozvino unotora 250W, 300W etc. yokutevedzera.
Pari, redu flagship 250W zviyo chiedza zvakakwana supersedes 400W uye 1000W akavanza chiedza kunobva. Muna 2014, retrofitting Our Kits muna 80W, 100W etc. Variants zvigadzirwa vakaiswa kudare. Bay uye mugwagwa yedu yakakwirira zviedza vakagamuchira appraisals zvakanaka zvakawanda vatengi vake.
The rinonyanya kushandiswa mishonga yedu iri dzokuchengetera, zvitoro dzezvitoro, yezvokutengeserana zvivako uye siyana Outdoor kurongwa. zvigadzirwa izvi panze akaita zvinotsiva pamisika European uye American. zvigadzirwa edu vanokwanisa vari kutsiva zvose zvisingachashandi chiedza manyuko kusanganisira CFL, CT, akatungamirira UV achirapa Systems uye Metal Halide mbiya kuti ane kuderedza simba rakawanda. chinangwa chedu chikuru ndechokuti kubatsira vatengi vedu kudzikira kwavo magetsi mari uye kuwana chinhu enviromentally noushamwari hweHIV.
Our sirogani kambani, musika-zvinangwa, kunyanya kufunga mukugadzira Kunze zvemakwikwi zvigadzirwa. Tinovimba zvechokwadi zvinobatsira yakawiriranwa kukura uye pamwe.